Umaki: uhlelo lokumaketha | Martech Zone
Umaki: uhlelo lokumaketha
Ukusetshenziswa kwemali yabezindaba emhlabeni kuyanda ngezinga lika-5.1%, okulindeleke ukuthi lifinyelele ku- $ 2.1 trillion ngo-2019, ngokusho kukaMcKinsey. Isikhangiso sedijithali esilungele ukudlula imali esetshenziswe ku-TV ngo-2018. I-TidyMarketer yethule isixazululo somkhankaso wokumaketha nomakhi wezinhlelo zezindaba, ikhalenda lomkhankaso, imibiko ezenzakalelayo nokunye okuningi, ngokubambisana kwamaqembu wokumaketha nama-ejensi. Ipulatifomu le-SaaS livumela abathengisi ukuthi bahlele, baxhumanise, basebenzisane, futhi balinganise konke ukuphathwa komkhankaso kusuka kungxenyekazi eyodwa. Yenzelwe uku
Ingabe uhlelo lwebhizinisi olubonakalayo lukufanele?
ULwesine, April 29, 2010 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 UScott Hardigree
Kuze kube manje, sengiqalile (kepha angikaze ngiqede) inqwaba yezinhlelo zebhizinisi zakudala. Ngakho-ke imvamisa ngivele ngiyiphikise “ngohlaka lwebhizinisi”, kepha ngasese ngifisa ukuthi ngabe ngithathe isikhathi sokubeka imigwaqo yamasu ami amade futhi amafushane ngokuningiliziwe. Ngakho-ke kulokhu ngibhale uhlelo lwebhizinisi olubukwayo.